Shiinaha Maro adag Roving Maro adag dun warshad iyo alaab | Yuniu
Fiberglass yarn waa qalabka dahaarka korantada, dharka warshadaha elektarooniga ah, tuubooyinka iyo alaabada ceyriinka ah ee warshadaha kale. Waxaa si aad ah loogu isticmaalay guddiga wareegga, iyadoo la tolay dhammaan noocyada kala duwan ee dharka ah ee ku saabsan baaxadda xoojinta, dahaadhka, u adkeysiga daxalka, iska caabinta kuleylka iyo wixii la mid ah.
Maro adag oo loo yaqaan 'Fiberglass dunn' Awooddeeda sare, iska caabinta daxalka, sare
caabbinta heerkulka, nuugista qoyaanka, waxqabadka korantada wanaagsan, ee loo isticmaalo tolidda, dahaarka, fiilada fiyuuska miinada, iyo lakabka dahaadhka fiilada, mashiinada mashiinnada korantada iyo qalabka dahaarka qalabka, mashiinka mashiinnada kala duwan lagu tolo, iyo dunta kale ee warshadaha.
Ku qor USA
1.Woven Maro adag mesh (dun guud for dunta, wareegaya for weft)
Ka tagida maro elektaroonik ah oo kala duwan
3. Xadhko xarig ah oo xarig leh
5. Fiyuus dillaacay
Qalabka maaddada indha sarcaadka ee loogu talagalay sameynta wareegga korantada, iwm.
Waxaa loo isticmaalay bobbin xaashi ama bobbin caag ah, badeecooyinka dhammeeya ayaa lagu ridayaa bacda Polyetylenka, ku dheji bacda, ka dibna ku dheji dunta maaddada maaddada dhalada ah kartoonka, ugu dambayntiina sariirtaada gashada.
Shixnad: Bad ama diyaarad.
Faahfaahinta gaarsiinta: 15-20 maalmood kadib helitaanka lacag bixinta horumarsan.
1.Waxyaalaha dunta dhalada ah waa qiyaasta Silane, oo leh hufnaan wanaagsan, xiisad labis, iyo xoog siligga sare.
2.Majarka fiber-ka ah ee dhalada ah wuxuu leeyahay Minzz Fuzz inta lagu guda jiro howsha.
3.Or fiber dhalada muraayaddu waxay leedahay impregnation wanaagsan, firidhida fiber wanaagsan, iyo guryaha farsamo farcan isku dhafan.
4.Strands ayaa si fudud u furan si ay u soo bandhigaan fiilooyinkooda oo leh xoog xoog badan oo shaqeynaya
Heerka hoose ee xoqidda qallalan ee ka sarreysa meelaha xiriirka laga helayo.
6. Waxaan sidoo kale wax ku soo saari karnay hadba sida macaamiisha loo baahan yahay.
Q1.Waa maxay farqiga u dhexeeya alaabadaadu facooda?
Gaarsiinta dammaanad qaadka ah, tayada la jaanqaadaysa heerarka caalamiga ah, iyadoo la jaanqaadaysa heerarka ugu sarreeya ee baaritaanka EU
Q2.Sidee alaabooyinkaagu u sameysan yihiin? Maxay yihiin waxyaabaha gaarka ah?
Waxaa badanaa ku jira silica, pyrophyllite, ciid quartz, nuuradda, dolomite, birthite iyo brucite
Q3aadMa waxaad ku dallacdaa caaryada? Waa imisa? Ma la soo celin karaa? Sidee loo soo celiyaa?
Q4.Shato noocee ah ayey shirkadaada dhaaftay?
Q5Macaamiilkee ayey shirkadaadu ka gudubtay kormeerka warshada?
Hore: Fibreglass Roving toos ah
Xiga: 1200Tex 2400Tex Maro adag toos Roving From Shiinaha